Mirongatra ny doro tanety any Arzantina noho ny tombontsoa ara-toekarena · Global Voices teny Malagasy
Manentana hisian'ny lalàna miaro tontolo-iainana ao amin'ny Twitter ny Arzantiniana
Voadika ny 09 Novambra 2020 7:04 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Nederlands, русский, عربي, Français, Español
Doro tanety tany amin'ny Paraná Delta avaratr'i Buenos Aires. Sary avy amin'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana, Wikimedia Commons, Aogositra 2020.
Nirongatra ny doro tanety tany afovoany sy avaratr'i Arzantina nandritra ny volana maro, ary efa maherin'ny 400.000 hektara, izay mitovy habe amin'ny kianja filalaovam-baolina maherin'ny 560.000, no may kila hatramin'izao. Raha ny angom-baovao farany avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Mpamonjy Voina Nasionaly, ny telo ambin'ny folo amin'ireo faritany miisa telo ambin'ny roapolo any Arzantina no voakasik'izany, ahitana fahapotehan'ny tontolo iainana ara-boajanahary sy ny zavaboary.
Niseho tany amin'ny Vinanin'ny Reniranon'i Paraná tamin'ny volana Febroary no nirongatra voalohany ny doro tanety ary nahatratra ny faratampony tamin'ny volana Aogositra rehefa nanomboka nihanaka ny doro tanety hafa tany afovoan'ny faritanin'i Córdoba.
Manambatra ny heriny amin'ireo faritany voakasik'izany ankehitriny ny governemanta federalin'i Arzantina, ary nitondra mpamonjy voina fanampiny sy fitaovana ho azy ireo niaraka tamin'ny fanampiana avy amin'ny faritany hafa.
Ny asan'ny olombelona, indrindra ​​ny fikarakarana ny tany ho an'ny biby fiompy sy ny fambolena, no heverina fa tompon'antoka voalohany tamin'ny doro tanety raha ny filazan'ny Sekretera Mpanara-maso sy Misahana ny Tontolo Iainana tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny sehatra fampahalalam-baovao Arzantina Chequeado:
Sarin'ny doro tanety amin'ny zanabolana ao amin'ny faritanin'i Córdoba. Saripikan'i NASA FIRMS, Wikimedia Commons. Septambra 2020.
Ao amin'ny Vinany [Reniranon'i Paraná], mino izahay fa tsy tongatonga ho azy na tsy fanahy iniana, fa niniana natao ny ankamaroany na izy rehetra. Heverinay fa ny fikarakarana ny tany ho an'ny fiompiana sy ny voka-pambolena ny antony manosika hanao izany, ka izany no nahatonga ny Minisitry ny [Tontolo iainana] Juan Cabandié niseho ho mpitory teny amin'ny Fitsarana.
Ny fiovaovan'ny toetrandro toy ny maripana ambony, ny rivotra mahery, ny haintany tafahoatra no nampihenjana kokoa ny zava-misy ka nahatonga ny doro tanety tsy voafehy ka nihanaka nanakaiky kokoa ireo tanàndehibe.
Niteraka hatezeram-bahoaka ny sary mampihoro-koditra mampiseho ny doro tanety tany an-tanànan'i Córdoba satria nanondro hatrany ireo fihariana goavana ara-pambolena sy tetikasa goavana ara-panorenana any amin'ny faritra arovana sy ny ala mikitroka ho nahatonga ny doro tanety ny tatitra. Nitaraina ihany koa ny vahoaka tamin'ny tsy fandraisan'andraikitry ny tompon'andraikitra amin'ilay antsoina hoe “doro tanety voafehy” amin'ny tany lava volo. Nanoratra tao amin'ny famoaham-baovao ao an-toerana ilay mpampianatra filozofia Constanza San Pedro sy ilay mpikatroka Clarisa Mensa :
Mila mametraka politika maharitra isika miaraka amin'ny tanjon'ny fambolena fototra, ny fampandrosoana ary ny fanasoavana ny tantsaha sy ny fianakaviana indizeny, mba hiainan'ny mponina mifanaraka amin'ny tontolo iainana.
Naneho ny hatezerany sy ny alahelony tamin'ny alàlan'ny Twitter sy tany amin'ireo sehatra tambajotra sosialy hafa ny vahoaka tamin'ny tenirohy ahitana ny #ArgentinaEnLlamas, #ApaguenElFuego, #BastaDeQuemas sy #LeydeHumedalesYA (amin'ny teny Malagasy: Mirehitra i Arzantina, Atsaharo ny Doro Tanety, Ampy Izay ny Fandoroana, ary Lalàna ho an'ny Faritra Mando ANKEHITRINY), ankoatra ny hafa.
“Only after the last tree is dead, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will we realize that we cannot eat the money”#ArgentinaEnLlamas, literally.
“Rehefa maty ny hazo farany, rehefa voapoizina ny rano farany, rehefa tratra ny trondro farany, izay ve isika vao hahatsapa fa tsy azo hohanina ny vola” #ArgentinaEnLlamas, ara-bakiteny.
Iza no mandoro an'i Arzantina?
Mitranga ny fanapotehana ny biby sy ny zavamaniry amin'izao fotoana izao. Any amin'ny faritra mando any Paraná, Sierra de Córdoba ary toerana maro manerana ny firenentsika.
Miresaka momba ny fandoroana izy ireo fa tsy ireo nandoro azy.
May ny firenena noho ny fihariana goavana ara-pambolena sy ny faka-tombombarotra goavana amin'ny asa fanorenana. Any amin'ny toerana misy afo, androany no misy saozaha sy milina vonona amin'ny fanamboarana…
Namana iray, niady tamin'ny afo tany amin'ny faritra Vinany, no naka andian-dahatsary ahitana ny toe-java-misy iray manontolo tao amin'ny firenena. Mangataka izy ireo mba ho hitan'ny ONU izany. Aparitaho!!
Na dia nolaniana tamin'ny taona 2007 aza ny Lalàna momba ny Ala, izay nametraka loharanom-bola nasionaly ho fiarovana ny ala voajanahary dia nanamarika ny tatitra maromaro fa tsy nohajain'ny manampahefana ny lalàna ary mitohy ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna. Antony lehibe iray mahatonga ny antoko politika, fikambanana ary mpikatroka politika samihafa hiasa amin'ny fampiroboroboana ny lalàna voafaritra manokana izay mandrara ny fivarotana faritra may mba hisorohana ny fandoroana iniana atao.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa izay, volavolan-dalàna momba ny fiarovana ny faritra mando miisa telo ambin'ny folo no natolotra, indrindra ho an'ny faritra Vinany Paraná. Antenaina fa handrisika sy hanafaingana ny fizotran'ny fankatoavana ny lalàna mba tsy ho tara loatra ny tsindry ara-tsosialy maro.
20 Janoary 2021Lalàna